यी १९ वर्षकी युवती वुटवल जाने ट्रकआएको देखेर लिफ्ट मा गिने तर वुटवल पुग्न नपाउदै ट्रकभि त्रै…. – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी १९ वर्षकी युवती वुटवल जाने ट्रकआएको देखेर लिफ्ट मा गिने तर वुटवल पुग्न नपाउदै ट्रकभि त्रै….
Poonam July 17, 2021 समाचार	0
काठमाडौ । सानै उमेरमा विवाह गरेर २ वर्षको छोराको आमा बनेकी १९ वर्षकी किशोरी काठमाडौवाट वुट वल जान चाहिन्थन् । उ नीसंग २ वर्षका छोरा पनि थिए । नि षे धा ज्ञा का कारण सवारी साधन न चलेका कारण उनी एउटा ट्रकमा लिफ्ट मागेर वुटवल जाँदै गर्दा उनलाई ४ जनाले ट्रकमै कर णी गरेका छन् ।
असार २७ गते रुकुमकी १९ वर्षीया युवतीलाई ४ जनाले कर णी गरेका हुन् । नि षे धा ज्ञा का कारण उनी काठमाडौमा काम विहिन भएर बुटवल काम खोज्न जान लागेकी थिइन् । पुरानो काम गरेकै ठाउँमा जान लागेकी उनले आफ्नो जिवनमा यस्तो ठूलो घ टना होला भन्ने कल्पना गरेकी थिइनन् ।
ना ५ ख २८७० नम्बरको ट्र कका चालक सुनिल महतोले उनलाई लिफ्ट त दिए तर नियत भने राम्रो राखेनन् । नारायणघाटसम्म लगिदिने भनेका सुनिलसंग मुग्लिन नारायणघाट सडकमा पहिरोका कारण उनीहरू जाममा परेपछि दुई दिन वाटोमै बस्नुपरेको थियो । त्यो बेला उनले कर णी गरे ।
जाम खु लेपछि उनले आफ्ना अर्का साथी ना ६ ख ३३६९ नम्बरको ट्रक चालकको जिम्मा लगाए । आफुले उनलाई के गरेरु भन्ने कुरा पनि सुनाइदिए । शिववालकले ती किशोरीलाई बुटवल लैजान्छु भनेर झुक्याएर वीरगञ्जतर्फ लगे। उनले जंगलमा लगेर युवतीलाई कर णी गरे ।
शिववालकसँगै रहेका २७ वर्षीय सहचालक इन्दल चौहानले पनि उनलाई छोडेनन् । ट्रकमा अर्का एक यात्रु पनि थिए । ति ४० वर्षीय भोला भन्ने यात्रुले पनि ड्राइपोर्ट परवानीपुर सडक खण्ड बीच बाटोमा कर णी गरे । वुटवल लैजाने भनेर उनीहरुले बुधबार साँझ ५ बजे वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ स्थित ड्राइपोर्टमा ट्रक वाट झा रीदिए ।
संवाहक नेपालले युवा नेपाल, १०० ग्रुपलाई यसरी गर्यो खाद्यान सहयोग